टेम्पु चालक चन्द्रमायाको सपना – छोरी पढाउनु छ हजुर « Naya Bato
टेम्पु चालक चन्द्रमायाको सपना – छोरी पढाउनु छ हजुर
चन्द्रमायाले गाँस र बासका लागि मात्रै बिनातलब गलैंचा कारखानामा काम गरिन्, धर्म परिवर्तन पनि गरिन्, बिहे गरिन्, छोरी जन्माइन्, अन्ततः आफ्नो परिचय बनाइन्—टेम्पु चालक
‘टेम्पु चलाउने महिलाजति सबै बम्बईमा बेचिएर फर्किएका हुन् । श्रीमानले छोडर हिँडेका, बिग्रेका हुन्— यस्तै गाइँगुइँ सुन्छु र दुःख लाग्छ,’ यसो भन्दै गर्दा चन्द्रमायाको मुहार अलिअलि अँधेरियो ।
काम गरेर खानेहरूलाई किन त्यसो भन्छ यो सहर ? उनलाई नरमाइलो लाग्छ । ‘बेचिएर आएका महिला पनि होलान् । के उनीहरूले काम गरेर खान पाउनुपर्दैन ? मानिसहरूलाई कति नानाभाँती कुरा गर्ने फुर्सद भएको होला ?’ चन्द्रमाया आक्रोश व्यक्त गर्छिन् । चन्द्रमाया तामाङ, उज्यालो भविष्य खोज्न सहर आएकी हुन्, ०५८ सालतिर, हेटौंडाको लामटारदेखि । जतिबेला उनी जवान थिइन्, अहिले उनको उमेर ढल्कँदो छ, ४० मा हिँड्दै छिन् ।
योबीचमा चन्द्रमायाले गाँस र बासका लागि मात्रै बिनातलब गलैंचा कारखानामा काम गरिन्, धर्म परिवर्तन पनि गरिन्, बिहे गरिन्, छोरी जन्माइन्, अन्ततः आफ्नो परिचय बनाइन्— टेम्पु चालक ।
‘टेम्पु चलाएरै छोरीलाई पढाउने धोको छ,’ चन्द्रमाया भन्छिन्, ‘हाम्रो गाउँमा छोरीलाई स्कुल पठाउने चलन थिएन, पठाइहाले पनि बाबुआमाले कापी–कलम किन्ने खर्च दिन सक्दैनथे, गाउँमा कसैका छोरी पनि स्कुल जाँदैनथे । मैले एक कक्षा पनि पढ्न पाइनँ । छोरीले पढोस् भन्ने चाहना छ ।’
चन्द्रमायाको परिवारलाई साँझ–बिहानको छाक टार्न धौ–धौ हुन्थ्यो । पढ्ने उमेरमा उनले घाँस काट्न सिकिन्, दाउराको भारी बोकिन् । अनि, बाख्राका गोठाला लागेर बित्यो, उनको बाल्यकाल । गाउँघरमा दाजुभाइ स्कुल गएको देख्दा उनलाई पनि पढ्न जान रहर लाग्थ्यो । तर, कहिल्यै मेटिएन त्यो रहर ।
उनलाई आफ्नो नाम मात्रै भए पनि लेख्न सिक्ने रहर थियो, प्रौढ शिक्षा पढ्न गइन् । ‘दिनभरि घरको काम गरेर साँझमा प्रौढ शिक्षा पढ्न जान्थे, बुवाले त्यति राम्रो मान्नुहुन्नथ्यो । बुवालाई दोष दिन चाहन्नँ, गरिब र अशिक्षित भएपछि त्यस्तै हो,’ चन्द्रमाया भन्छिन्, ‘नाम लेख्नसम्म जान्ने भएपछि प्रौढ शिक्षा पढ्न छाडें ।’
दिनानुदिन घरको आर्थिक अवस्था खस्कँदो थियो । उनका बुवाआमाले अर्काको मेलापात गर्थे, घरको उब्जनीले खान पुग्दैनथ्यो । चन्द्रमाया जेठी छोरी, बहिनीहरू सानै थिए । उनले बुवाआमाको दुःख हेर्न सक्दिनथिन् ।
गाउँमा उनले थाहा पाउँथिन्, पैसा कमाउन भनेर मान्छेहरू काठमाडौं हिँड्थे, कोही साउदी कतार । उनलाई पनि सहर छिरेर पैसा कमाउने रहर लाग्न थाल्यो ।
गलैँचा कारखानामा दिनहुँ आठ घन्टा काम गर्थें । काम गरेबापत कारखानामै खान–बस्न पाउँथे । तर तलब पाउँदिनथें । तलब माग्दा भन्थे— खान पाएकी छौ, बस्न पाएकी छौ, केको तलब ?’
खल्तीमा एक हजार रुपैयाँ र टाउकामा आमाको आशीर्वाद बोकेर चन्द्रमाया काठमाडौं आइन् ।‘एकजना साइनोले मामा पर्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गलैँचा कारखानामा काम लगाइदिनुभयो,’ चन्द्रमाया भन्छिन्, ‘दिनहुँ आठ घन्टा काम गर्थें । काम गरेबापत कारखानामै खान–बस्न पाउँथे । तर तलब पाउँदिनथें । तलब माग्दा भन्थे— खान पाएकी छौ, बस्न पाएकी छौ, केको तलब ?’
उनले सादा गलैंचा राम्रोसँग बुन्न सक्ने भइन् । तर, एक रुपैयाँ तलब नपाउने भएपछि नौ महिना काम गरेर गलैंचा बुन्ने काम छाडिन् । अर्को काम खोज्न काठमाडौंका गल्ली–गल्ली भौँतारिइन् । निराश भइन् ।
गलैंचा बुन्ने काम गर्दा उनले हल्ला सुनेकी थिइन्— धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन बने काम पाइन्छ, खाने बस्ने व्यवस्था पनि हुन्छ । उनी भन्छिन्, ‘अरु विकल्प थिएन, हिन्दूधर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन बन्नेबाहेक ।’ उनी क्रिस्चियन बनिन्, तत्कालको आधा समस्या समाधान भयो । भन्छिन्, ‘कमसेकम पेट भर्न र टाउको लुकाउनका लागि चिन्ता गर्नुपरेन ।’
क्रिस्चियनहरूले उनलाई सिलाई सिक्ने तालिममा लगाइदिए । उनी खुसी भइन्, अब त पैसा कमाएर घर पठाउन पाइन्छ भनेर । सिलाई तालिम पनि सोचेजस्तो सहज भएन । उनलाई सामान्य हिसाब पनि आउँदैनथ्यो । हिसाब गरेर कपडा काट्ने सिलाउने उनको बसको कुरा भएन । ६ महिना अल्झेपछि चन्द्रमायाले सिलाइ सिक्ने काम पनि छाडिन् ।
यसैबीच उनको विवाह भयो, चर्चमा प्रार्थना गर्न आइरहनेसँग । चर्चमा आउने–जाने क्रममा उनीहरूको भेट भयो, दुवै एक–अर्काको प्रेममा परे । यो थाहा पाएपछि चर्चका फादरले उनीहरूकोे विवाह गरिदिए ।
चन्द्रमायाका श्रीमान्को घर झापाको भद्रपुर हो । निरक्षर, गरिब परिवारका चन्द्रमायाका श्रीमानले पनि सानैमा आमा गुमाएका रहेछन् । चन्द्रमाया भन्छिन्, ‘बुवाले दोस्रो बिहे गरेपछि घरमा सौतलो व्यवहार खेप्नुपरेछ, त्यसैले उहाँ पनि काम गरेर खान काठमाडौं आउनुभएको रहेछ ।’
चन्द्रमायाका श्रीमान्ले साइकल मर्मतको काम गर्थे । खर्च चलाउन मुस्किलै थियो । बजारमा तरकारी किन्न जाँदा चन्द्रमायाले देख्थिन्, महिलाले टेम्पु कुदाएको । उनलाई पनि टेम्पु कुदाउने रहर लाग्यो । साथीहरूसँग बुझिन्, ‘टेम्पु सिक्न १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने रहेछ ।’
श्रीमानले साइकल मर्मतबाट कमाएको पैसा उनले खुत्रुकेमा हाल्थिन् । एक दिन खुत्रुकै फुटाइन्, सात हजार जम्मा भएको रहेछ । त्यसमै ऋणधन गरेर उनले टेम्पु चलाउन सिकिन्, महिना दिन लगाएर, यो त्यस्तै ०६९ सालतिरको कुरा हो ।
पहिलो दिन चक्रपथमा टेम्पु कुदाउँदा चन्द्रमायालाई निकै डर र खुसी दुवै लागेको थियो । टेम्पु चलाउन सकेको खुसी त छँदै थियो, तर भीडभाडमा पहिलोपटक टेम्पु चलाउँदा डर लाग्नु स्वाभाविकै थियो ।
टेम्पु चलाउन सकेको खुसी त छँदै थियो, तर भीडभाडमा पहिलोपटक टेम्पु चलाउँदा डर लाग्नु स्वाभाविकै थियो । फेरि पेसेन्जरहरूले हजार–हजारका नोट दिन्थे, उनलाई त्यति हिसाब नआउने । तर उनी धैर्यले काम गर्न गर्थिन् । भन्छिन्, ‘नहडबडाइ पैसा फिर्ता गर्न र भीडभाडमा ढुक्कले टेम्पु चलाउन सिक्न मलार्ई एक महिनाजति लाग्यो ।’
सुरुमा दैनिक तीन सय रुपैयाँ टेम्पु साहुलाई बुझाउनुपथ्र्यो । उनी भन्छिन्, ‘कहिले त्यति पनि हुँदैनथ्यो । कहिले त एक राउन्ड लगाउँदा एकजना मात्रै पेसेन्जर चढ्थे ।’
अहिले उनी दैनिक १२ घन्टा टेम्पु चलाउँछिन् । दैनिक एक हजार जस्तो आम्दानी गर्छिन् । उनका श्रीमान् अहिले बिदेसिएका छन् । कोठा भाडा तिर्ने, घरखर्च जुटाउने र छोरीलाई पढाउने जिम्मेवारी चन्द्रमायाकै काँधमा छ । उनकी छोरी आठ कक्षामा पढ्छिन् । ‘छोरीलाई अंगे्रजी स्कुलमा हालेकी छु । मासिक १५ सय फिस लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले त पढ्न पाइनँ, छोरीलाई पढाउने धोको छ ।’
भ्यान चलाउने धोको
दिनहुँजसो सडकमा ठूला सवारीका चालकले पेल्ने, हेप्ने, जिस्काउने गर्छन् । ‘सडक सबैको हो नि, तर ठूला गाडी चलाउनेले हेप्छन्, पेल्छन्,’ चन्द्रमाया भन्छिन्, ‘यो हेपेको देखेर मैले पनि सामान ओसार्ने पिकअक भ्यान चलाउन सिक्दै छु ।’
राशिफल: २०७५ ज्येष्ठ ४ गते भोलि शुक्रबार, माताको कृपाले यस्तो रहनेछ तपाईको दिन
यौन दुर्बलताका कारण दीपेन्द्रकी प्रेमिका देवयानीको भारतीय पतिसँग डिभोर्स !
विश्व किर्तिमान राख्दै २२ औं पटक सगरमाथा शिखरमा पुग्न सफल नेपालको सपूत कामिरिता शेर्पा
राशिफल: २०७५ ज्येष्ठ ३ गते भोलि बिहिबार, माताको कृपाले यस्तो रहनेछ तपाईको दिन
राशिफल: २०७५ ज्येष्ठ ०२ गते आज बुधबार, माताको कृपाले शुभ रहोस् तपाईको दिन
कस्तो रहनेछ तपाईको यो महिना ? हेर्नुस जेष्ठ महिनाभरिको मासिक राशिफल